မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack ခေါက်တံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အစာရှောင်ခြင်း stack တံခါး,လျင်မြန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး stack တံခါး,အလိုအလျောက် stack PVC တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါး > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack ခေါက်တံခါး
1. Frame က: 2MM အအေး-လိပ်သံမဏိ thicknesses ။
2. မော်တော်: ဂျာမဏီချုပ်ဘရိတ်မော်တာ (ပြင်), ပါဝါ 0.75KW, ပါဝါထောက်ပံ့ရေး 220V ။
3. ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်က: လျှပ်စစ် box ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဂျပန်မစ်ဆူဘီရှီ converter နှင့် PLC တင်သွင်း (150% 1HZ)
4. ဖွင့်ပွဲ & ပိတ်ပွဲမြန်နှုန်း: 0.6-1.5m / s ကို (ချိန်ညှိ) ။
5. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိရိယာ: ကိုရီးယား Photocell အာရုံခံ, အတားအဆီး sensing သည့်အခါအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုရပ်တန့်။
6. ကုလားကာ: ပြင်သစ် High-density ကို polyester ဖိုင်ဘာနှင့်မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့, 0.8MM အထူ, အမျိုးမျိုးအရောင်တွေကို ရွေးချယ်. နိုင်ပါတယ်: အနီရောင်, အဝါရောင်, အပြာရောင်, အစိမ်းရောင်, လိမ္မော်ရောင်, မီးခိုးရောင်, အဖြူ, ပွင့်လင်း, စတာတွေဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ: 4000 / 3500N / 5cm, မျက်ရည်ယိုအစွမ်းသတ္တိကို 600 / 600N ။ မီး-proofing အဆငျ့: ဂျာမန်စံ DIN75200 အသုံးပြုမှုအပူချိန်: -30 ကို C +70 C.
7. လေတိုက်နှုန်းခံနိုင်ရည်: အဆိုပါလူမီနီယမ်အလွိုင်းလေတိုက်ခံနိုင်ရည်အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ Girder အားကောင်းလာစေပါတယ်။
8. ကုလားကာကိုအစားထိုး function ကို: လူမီနီယမ်အလွိုင်း Girder အားဖြည့်2ကိုအပိုင်းပိုင်းကုလားကာကြားကတက်နေတဲ့ဆိုကာစရာကုလားကာကြိုးပဲ့လျှင်, သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကယ်တင်အလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်ပါသည်။
9. Transparent ပြတင်းပေါက်: 1.2MM အထူပွင့်လင်း PVC င်းဒိုးအရွယ်အစားနှင့်တည်နေရာ, သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြထကျပိုပွီးပိုမိုလုံခြုံပါသည်။
10. အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်: အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြီးမဆိုမညီမညာဖြစ်နေသောမြေပြင် fit ငှါ, လမ်းညွှန်များနှင့်အထူးအောက်ခြေဒီဇိုင်းအတွင်းပိုင်း Installed နေကြသည်။
11. Cotrolling လမ်း: Push ကိုခလုတ် + ရေဒါအာရုံခံကိရိယာအလွန်အဆင်ပြေ။
အလွယ်တကူနဲ့အတိအကျ, စက်မှုကန့်သတ် switch ကို: 12 Switch ကန့်သတ်။
13. အရေးပေါ် STOP: control panel ကိုအပေါ်အရေးပေါ်ရပ်တန့်ခလုတ်နှင့်အတူနေဖြင့်အလွယ်တကူရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်
လက်တစ်ချိန်က disconnect သို့မဟုတ်မတော်တဆထိခိုက်မှု
14 ပြတ်ရွေ့ပြန်လည်နာလန်ထူ function ကို: အားလုံး Hongfa ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု, အမှားနာလန်ထူ function ကိုနှင့်အတူစနစ်ကအာဏာကိုအပြီး Self-ပြန်လည်နာလန်ထူပယ်ဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
15. Delivery အချိန်: အတည်ပြုခဲ့သည်စာချုပ်နှင့်သိုက်နှင့်အတူအကြောင်း7စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်။
အလိုအလျောက်အမြင့်မြန်နှုန်းခေါက်-up, တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစာရှောင်ခြင်း stack တံခါး လျင်မြန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး stack တံခါး အလိုအလျောက် stack PVC တံခါး အစာရှောင်ခြင်း PVC stack တံခါး အစာရှောင်ခြင်း Shutter တံခါး အစာရှောင်ခြင်း Rolling တံခါး အစာရှောင်ခြင်းတံခါး Radar အစာရှောင်ခြင်းဇစ် PVC တံခါး